Lix shirkadood oo kale oo caalami ah ayaa hirgeliya IATA Travel Pass
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Lix shirkadood oo kale oo caalami ah ayaa hirgeliya IATA Travel Pass
Airlines • Airport • Wararka Ururada • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Etihad Airways, Jazeera Airways, Jetstar, Qantas, Qatar Airways iyo Royal Jordanian, ayaa hirgelin doona IATA Travel Pass oo si weji -wareeg ah loogu gudbin doono shabakadaha diyaaradaha.
Shirkado diyaaradeed oo badan ayaa ku soo biiraya Emirates Airline oo ah hormuudka fulinta IATA Travel Pass.
Ku dhawaaqista, oo laga sameeyay dhinac -kii 77 -aad ee Shirka Sannadlaha ah ee IATA oo lagu qabtay Boston, ayaa daba socota kow iyo toban bilood oo tijaabooyin ballaaran ay sameeyeen 76 shirkadood.
IATA Travel Pass waa barnaamij moobayl oo heli kara oo xaqiijin kara tiro badan oo ah natiijooyinka baaritaanka COVID-19 iyo shahaadooyinka tallaalka dhijitaalka ah.
The Ururka Caalamiga ee Gaadiidka Cirka (IATA) waxay ku dhawaaqday in Etihad Airways, Jazeera Airways, Jetstar, Qantas, Qatar Airways iyo Royal Jordanian, ay hirgelin doonaan IATA Travel Pass oo si weji -wareeg ah loogu gudbin doono shabakadaha diyaaradaha. Shantaas diyaaradood waxay ku biiraan Emirates Airline oo ah hormuudka fulinta IATA Travel Pass.
Ogeysiiska, oo laga sameeyay dhinac 77aad IATA Shirka Guud ee Sannadlaha ah oo lagu qabanayo Boston, wuxuu daba socdaa kow iyo toban bilood oo tijaabooyin ballaaran ay sameeyeen 76 shirkadood.
“Ka dib bilooyin baaritaan ah, IATA Safarka Safarka hadda wuxuu galayaa wejigii hawlgalka. Barnaamijku wuxuu isku caddeeyay inuu yahay aalad wax ku ool ah oo lagu maareeyo qalalaasaha adag ee aqoonsiga caafimaadka safarka ee ay dowladuhu u baahan yihiin. Waana cod weyn oo kalsooni ah in qaar ka mid ah sumcadaha diyaaradaha ee ugu caansan adduunka ay u fidin doonaan macaamiishooda bilaha soo socda, ”ayuu yiri Willie Walsh, Agaasimaha Guud ee IATA.
Barnaamijku wuxuu siiyaa hab aamin ah oo aamin ah socdaalayaasha si ay u hubiyaan shuruudaha socdaalkooda, helaan natiijooyinka imtixaanka iyo iskaan shahaadooyinka tallaalkooda, hubiyaan in kuwani ay buuxiyaan meelaha loo socdo iyo shuruudaha ku -meel -gaadhka oo ay si dhib la’aan ah ula wadaagaan saraakiisha caafimaadka iyo shirkadaha duulimaadka ka hor bixitaanka. Tani waxay ka fogaan doontaa safka iyo ciriiriga hubinta dukumiintiyada - si ay uga faa'iideystaan ​​socotada, diyaaradaha, garoomada diyaaradaha iyo dawladaha.
IATA Safarka Safarka waa barnaamij moobiil ah oo heli kara oo xaqiijin kara tiro badan oo ah natiijooyinka baaritaanka COVID-19 iyo shahaadooyinka tallaalka dhijitaalka ah. Hadda shahaadooyinka tallaalka ee ka socda 52 waddan (oo matalaya ilaha 56% ee safarka hawada adduunka) ayaa lagu maamuli karaa iyadoo la adeegsanayo barnaamijka. Tani waxay kor ugu kici doontaa 74 dal, oo ka dhigan 85% taraafikada adduunka, dhammaadka Noofembar.
IATA Travel Pass ayaa la filayaa inay kaalin muhiim ah ka qaadato ka soo kabashada warshadaha duulista saamaynta COVID-19. Xalka digitalized-ka ah ee lagu maareeyo waraaqaha COVID-19 ee aqoonsiga caafimaadka safarka ayaa taageeri doona ku noqoshada safarka marka xuduudaha dib loo furo. Iyada oo dawlado badani ay ku tiirsan yihiin shirkadaha diyaaradaha ee dukumintiga COVID-19 hubinta tani waxay muhiim u noqon doontaa in laga fogaado safafka iyo ciriiriga gelitaanka marka safarku sii kordhayo.